News - Kala soocida iyo astaamaha mashiinka maaskaro
Kala soocida iyo astaamaha mashiinka maaskaro
Mashiinka jirka maaskaro wax soo saarka si toos ah wax soo saarka, oo ay ku jiraan quudinta, nooca caag ah galinta / xarigga aluminium, xulashada goobta, isku dhafka ultrasonic, jarista iyo wixii la mid ah, soosaarku aad ayuu u sarreeyaa, wuxuu soo saari karaa 1-200 gogo 'daqiiqaddii. Xeerka xawaaraha ku-beddelka is-beddelka awoodda ugu weyn wuxuu noqon karaa mid deg deg ah ama gaabis ah. Maaskarado kala duwan ayaa lagu soo saari karaa iyadoo la adeegsanayo qalab kala duwan. Badeecaduhu waxay leeyihiin laba ama saddex lakab, oo tayada wax soo saarkuna ay deggan tahay, qalliinku ku habboon yahay, buuquna hooseeyo, aagga sagxaduna yar yahay. Qalabka la adeegsan karo: dunta aan dunka lahayn ee dunta leh ee dunta leh, 16-30g / m2, oo ku habboon ka shaqeynta waji-galka la tuuri karo.
Wax taaj oo kale oo saxafadeed u kulul: maaskaro maado ceeriin ah (dhar aan tolmo lahayn) iyo qaabka cadaadiska kulul (qaabka koobka). 1. Oo ay kujiraan waxqabad otomaatik ah iyo qaab quudin; 2. Samaynta hal xabbo oo afar waji ah mar kasta.
Cad: waxaa loo isticmaalaa lakabka sare (lakabka difaaca) ee maaskaro koobka ah. Waxyaabaha birta ah ee birta ah waxaa loo isticmaalaa sameynta giraanta ubax. Mindidu waa mid u adkeysata dharka oo waxay leedahay adeeg dheer. Isbeddelka nooca aasaasiga ahi waa mid jajaban, deg deg ah oo heerkiisu sarreeyo. Adoo adeegsanaya mowjadaha 'ultrasonic' iyo giraangiraha birta birta ah ee gaarka loo yaqaan 'steel steel processing, cidhifka dharka ayaan waxyeello u geysan doonin, looma baahna in la kululeeyo marka wax la soo saarayo iyada oo aan la cunin, waana loo shaqeyn karaa si joogto ah
Meesha banaan: riix lakabyada gudaha iyo dibedda ee maaskaro
Goynta: u adeegso shaabbadda pneumatic-ka si aad u gooyso cirifka dheer ee maaskarada.
Alxanka waalka neefsashada: Alxanka waalka neefsashada
Meesha alxanka: 130mm
Xawaare: 20-30 / daqiiqo
Qaab dhismeedka isku dhafan ee mashiinka mashiinka wuxuu qaataa xakamaynta cabirka hagaajinta amniga; kumbuyuutarka xakamaynta caqliga wuxuu ku guuleysan karaa saxnaanta kun kun ee labaad; hagaajinta heerka caaryada, mootada fuselage si toos ah ayey u kacdaa oo u soo degtaa, iyo hagaajinta salka ku haysa.
Mashiinka dhegta mashiinka alxanka: xawaaraha: 8-12 gogo '/ min. waxaa loo isticmaali karaa diyaaradda alxanka, suunka dhegta gudaha / suunka dhegta ee dibedda, maaskaro caadi ah, nooca biqsiga shimbiraha iyo noocyo kale oo waji gaar ah u eg. Ka dib marka jirka macsarada la soo saaro, faashadda dhegta ayaa gacanta lagu mideeyaa
Xiinka mashiinka dhejiska dhegaha dhegaha wuxuu adeegsadaa habka alxanka ultrasonic. Marka maaskaro loo wareejiyo booska howsha, mowjadda xiinka si otomaatig ah ayaa loo soo saari doonaa. Gariirka cabirka yar yar iyo soo noqnoqoshada sareeysa ayaa laga sameyn doonaa suunka dhegta, waxaana loo rogi doonaa kuleyl isla markaaba. Waxyaabaha la shaqeynayo waa la dhalaali doonaa, oo dhegta dhegta ayaa si joogto ah loogu dhajin doonaa ama loogu dhejin doonaa dhinaca gudaha ee maaskaro. Waa nidaam wax-soo-saar ah oo loogu talagalay soo-saarista maaskaro dhegta gudaha ah, taas oo keliya u baahan hal hawl wade Maaskaro jirka ayaa lagu dhejiyaa gabal gabal gabal gabal ah, tallaabada xigtana waxaa si otomaatig ah ugu shaqeeya qalabka illaa la dhammaystirayo wax soo saarka.
Nidaamka shaqada: (maaskaro jirka) quudinta gacanta → suunka dhegta quudinta otomaatiga ah → alxanka dhegaha dhegaha → dharka aan tolmo wanaagsan lahayn ee quudinta iyo duubista → alxanka dhinaca xiirida → goynta suunka dhinaca → wax soo saarka sheyga dhammeeyay → tirinta → dhammaystirka alaabta → gaadhsiinta qalabka suunka gudbiyaha
Laabi mashiinka maaskaro
Mashiinka maaskaro isku laaban, oo sidoo kale loo yaqaan mashiinka maaskaro nooca C-ga ah, waa mashiin si buuxda otomaatig u ah soo saarista jirka maaskaro isku laaban. Waxay isticmaashaa teknolojiyada 'ultrasonic' si ay isugu xirto 3-5 lakab oo ah dhar aan tolmo lahayn oo PP ah, kaarboonka firfircoon iyo walxaha miiraha, waxayna jaraan jirka maaskaro isku laaban, kaas oo ka baaraandegi kara 3m9001, 9002 iyo meydadka kale ee maaskaro. Marka loo eego alaabada ceeriin ee kala duwan ee la isticmaalay, waji-shareerka la soo saaray wuxuu la kulmi karaa heerar kala duwan sida ffp1, FFP2, N95, iwm. Suunka dhegta ayaa ah laastikada oo ah xarig aan tolmo lahayn, kaas oo ka dhigaya dhagaha qofka xiran inuu yahay mid raaxo leh oo aan cadaadis lahayn. Lakabka miiraha miiraha ee maaskarada ayaa leh saameyn wanaagsan oo shaandhayn ah, oo si fiican ugu habboon qaabka wajiga Aasiya, waxaana lagu dabaqi karaa dhismaha, macdanta iyo warshadaha kale ee wasakhda sare.
Hawlaha iyo astaamaha:
1. Waxay ka baaraandegi kartaa 3m9001, 9002 iyo jirka maaskaro isku laaban, oo lagu dhammayn karo hal mar.
Mashiinka maaskaro afka duck
Mashiinka duugga ah ee afka gashiga ku shaqeeya oo buuxa oo buuxa (mashiinka wax soo saarka maaskaro afka) ayaa ah mashiin soo saari kara maaskarada afka ee waaskada warshadaha wasakhda badan iyadoo la isticmaalayo mabda'a alxanka bilaa sumad la'aanta ah. 4-10 lakab oo ah dhar aan-tolmo lahayn oo PP ah iyo qalabka shaandhada (sida dharka dhalaalay, waxyaabaha kaarboonka firfircoon, iwm.) Waxaa loo isticmaali karaa jirka maaskaro mashiinka, si loo soo saaro alaabooyinka dhammaaday ee heerarka kala sifeynta kala duwan sida sida N95, FFP2, iwm. Mashiinkana wuxuu leeyahay heer sare oo otomaatik ah, laga bilaabo quudinta ilaa alaabooyinka la dhammeeyay waa xariiq hawlgal otomaatig ah: alaabta ceeriin ee quudinta si otomaatig ah, nidaamka gaarsiinta sanka oo madaxbanaan, isla markaana si otomaatig ah isugu laaban kara khadka sanka ee aan tolmo wanaagsan lahayn dhar, duubnaansho otomaatig ah iyo goyn wax soo saar oo dhammeystiran, isla markaana si toos ah ayey ugu dari kartaa daloolka neefsashada. Badeecada ay soo saartay mashiinka maaskaro afku waxay leedahay muuqaal qurux badan, waxqabad xasiloon, dhalid sare, heerka cillad hoose iyo hawl fudud.
Noocyada mashiinka maaskaro duckbill:
1, Nidaamka quudinta otomaatiga ah
2, Nidaamka isku laabma
3, Nidaamka daboolka kuleylka ee Ultrasonic
4, Mashiinka oo dhan wuxuu leeyahay waxqabad xasilloon, xawaare wax soo saar si joogto ah loo hagaajin karo, waxsoosaarka wax soo saarka sarreeya, illaa 60 qaybood daqiiqaddii, tirinta habboon oo sax ah, heerka isticmaalka sare ee alaabta ceeriin, hawlgal fudud iyo habboon oo ku habboon iyo hagaajin, heer sare oo otomatiga ah, iyo hoos u dhig wax ku ool ah. kharashka shaqada.
Mashiinka haysa tuubada, aan tolmo wanaagsan lahayn mashiinka qaadashada maaskaro, mashiinka sameeyaha maaskaro, mashiinka sameynta maaskaro qalliin, Mashiinka qaadashada maaskaro aan tolmo wanaagsan lahayn, mashiinka sameynta maaskaro wajiga qalliinka,